विश्वविद्यालयमा बन्द नगर्ने प्रतिबद्धता राजनीतिक नेतृत्वबाट आउनुपर्छ | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
विश्वविद्यालयमा बन्द नगर्ने प्रतिबद्धता राजनीतिक नेतृत्वबाट आउनुपर्छ
फागुन १६, २०७८ सोमबार ९:३९:३० | प्रा.डा. दीपक अर्याल
विश्वविद्यालयमा विभिन्न किसिमका राजनीतिक संरचना विद्यमान रहेको छ । जुन राजनीतिक संरचना २०४६ र २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन भन्दा अगाडि नै गठन भएका थिए । जुन उद्देश्यको लागि गठन भएको हो ती उद्देश्यहरु लगभग त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) भित्र पूरा भइसकेको स्थिति हो ।
त्रिविभित्र विद्यार्थीका सङ्गठनहरु, प्राध्यापकका सङ्गठनहरु र त्यसपछि कर्मचारीका जुन राजनीतिक संरचनाहरु छन्, उहाँहरुले आफूलाई अपडेट (चुस्त) गरिदिनुपर्यो । उहाँहरुले आफूलाई अहिलेको समय अनुसार अद्यावधिक गरेर अहिले हामी कुन जमानामा छौँ विश्वविद्यालय भनेको के हो, कति बजेदेखि कति बजेसम्म खोलिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो ।
सिद्धान्ततः हेर्ने हो भने विश्वविद्यालय चौबिसै घण्टा खोलिनुपर्छ । कुनै पनि बेला बन्द गर्न पाइँदैन । किनकि विश्वविद्यालयमा प्रयोगात्मक कक्षाहरु भइरहेका हुन्छन् । विभिन्न किसिमको प्रयोग तथा अनुसन्धान भइरहेको हुन्छ । रातभरि गर्नुपर्ने काम तथा अनुसन्धान हुनसक्छ । यस्तो खालको संवेदनशील विश्वविद्यालय जसलाई विगत र अहिलेको पदाधिकारीहरु र सरकारी नीति अन्तर्गत यसलाई एउटा उत्कृष्ट नमुना केन्द्र (सेन्टर अफ एक्सिलेन्स) बनाउने भनेर अगाडि बढिरहेको अवस्थामा सङ्गठनहरु भने पुरानै खालको सोचले अगाडि बढेको देखिन्छ ।
उहाँहरुलाई जसले निर्देशन गरेको छ ती नेतृत्वले पनि तपाईँहरु अब बन्द गर्ने प्रकृतिका नभएर अरु प्रकृतिका आन्दोलन गर्नुस् भनेर भन्नुपर्यो । उहाँहरुको माग जायज हुनसक्छ, पूरा गर्नुपर्ने खालको हुनसक्छ तर त्यसलाई पूरा गराउने खालको एउटा बेग्लै प्रारुप बनाउन सक्नुहुन्छ उहाँहरुले । यस किसिमको ठोस निर्णय राजनीतिक रुपमा हुनसक्ने स्थिति आयो भने केही हुनसक्छ ।
तालाबन्दीले खस्किएको शैक्षिक गुणस्तर
तालाबन्दी भइसकेपछि काम सबै ठप्प हुन्छ । एउटा चिठीको काम पनि हुँदैन । पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्यो भने डिन कार्यालय जानुपर्छ । डिन कार्यालय तालाबन्दी छ । डिन कार्यालयले विभागमा बैठक राख्नुपर्छ । डिन कार्यालय नै बन्द भएपछि कसरी बैठक हुन्छ ? त्यसपछि प्राज्ञिकमा जान्छ । प्राज्ञिक पनि बन्द छ । प्राज्ञिक गइसकेपछि कुनै कार्यकारी जाने हुन्छ भने कुनै प्राज्ञिकको निर्णयले हुने हुन्छ ।
तहगत रुपमा निर्णय गर्नुपर्ने जुन हाम्रो प्रक्रिया छ, यो ठीक छ । त्यसकारण यसलाई नै परिवर्तन गरौँ भन्नेतिर लाग्नु हुँदैन । संसारका सबै विश्वविद्यालयमा विभिन्न तहमा गएर पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने कुरा हुन्छ । पाठ्यक्रम परिवर्तन सानो कुरो साथै ठूलो पनि हो । यसका लागि विभागले धेरै अभ्यास गरेको हुन्छ ।
निर्णय प्रक्रियामा गइसकेपछि लगभग यो एक/दुई महिनामा टुङ्गिनु पर्ने कुरा हो । यो त दुई/चार वर्षमा पनि टुङ्गिँदैन । हामीले हाम्रो जल तथा मौसम सम्बन्धी पाठ्यक्रम दुई वर्ष अगाडि नै परिवर्तन गर्ने कुरामा थियौँ । तर, कहिले कोभिड अनि कहिले तालाबन्दीका कारण अहिलेसम्म गर्न सकिएको छैन । पहिला हामी तालाबन्द गर्दैनौँ भनेर सबैमा सचेतना तथा प्रतिबद्धता चाहिन्छ।
२०७६ साल मंसिर १३ गते उपकुलपति प्रा.डा धर्मकान्त बाँस्कोटाले पदभार ग्रहण गरिसकेपछि विश्वविद्यालय सुधारका लागि १५ सुत्रीय प्रयास गर्नुभएको छ । यो कार्यक्रम लागू गर्नको लागि उपकुलपति एक जनाले गरेर हुँदैन । यसमा शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी तथा विभिन्न सङ्घ, सङ्गठनहरुको राम्रो साथ चाहिन्छ । कुनै एउटा समूहले यसमा साथ दिएन भने यो काम लागू हुन सक्दैन ।
सुधारको योजनामा त्रिविलाई अनुसन्धान विश्वविद्यालय बनाउने भनिएको छ । नेपाल सरकारको पनि कतै कतै नीति योजनामा यो कुरा पढेका छौँ । विश्वविद्यालयका विभिन्न अनुसन्धान केन्द्रलाई अथवा केन्द्रीय विभागहरुलाई अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने भनिएको छ ।
अहिले विश्वविद्यालयका १२ वटा जति विभागमा केही मेहनत गर्ने हो भने गुणस्तरीय अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकसित हुनसक्छन् । यी विभागहरु उच्चस्तरीय अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास भइसकेको छ । यति भइसकेपछि पनि यी सबै विभागहरु केन्द्रको राजनीतिसँग जोडिएका हुन्छन् । केन्द्र नै बन्द भइसकेपछि कसरी काम गर्न सकिन्छ ? तालाबन्दी भएका कारण एउटा चिठीको जवाफ दुई महिनासम्म पनि आउँदैन भने काम कसरी हुन्छ ?
विद्यार्थीबाट रचनात्मक सुझाव आवश्यक
पहिलो कुरा विद्यार्थी विद्यार्थी भएर रहनु पर्यो । विद्यार्थी नियमित रुपमा विश्वविद्यालय आएर कक्षा लिनुपर्यो । अनुसन्धानको काम गर्नु पर्यो । विद्यार्थी भइसकेपछि उहाँहरुले आफ्नो पठनपाठनमा आवश्यक पर्ने सबै जायज माग राखेर अहिलेको समय परिस्थिति अनुसारको आन्दोलन गर्नुपर्यो ।
विद्यार्थी भएर गैरविद्यार्थी ढङ्गको आन्दोलन गर्नु भएन । विद्यार्थीले त किताब पुगेन कि त्यस किसिमको आन्दोलन गर्नुपर्यो । पुस्तकालय भएन भने त्यो आन्दोलन गर्नुपर्यो । त्यो आन्दोलन पनि जुलुस निकालेर भएन अब रचनात्मक आन्दोलन गर्नुपर्यो । एसएमएस गर्नुपर्यो । यो कुरा भएन भनेर इन्टरनेटमा राख्नुपर्यो । सामाजिक सञ्जालमा राख्नुपर्यो । पुस्तकालयमा पुस्तक छैन भनेर च्यातिएका पुस्तकको फोटो टाँस्नुपर्यो ।
विद्यार्थी भएर अतिरिक्त क्रियाकलापमा भाग लिन कहिले कहिले त्रिवि र काठमाण्डौ विश्वविद्यालयबीच प्रतिस्पर्धा गरौँ । यस्ता अन्य खेलकुदका प्रतियोगिता पनि त्रिवि र अन्य कलेजबीच गरौँ । यसमा पनि विद्यार्थीका लागि फुटबल छैन कि भलिबल छैन कि अथवा उचित आहारविहार छैन कि, क्यान्टिनको व्यवस्था छैन कि, शौचालयको व्यवस्था छैन कि यस्ता आन्दोलन गर्नु भए हुन्थ्यो ।
उहाँहरुले गरेको आन्दोलन शैक्षिक प्रशासन आफ्नो स्वार्थभन्दा बाहिरतिर गएर आन्दोलन मोडिन सक्छ, मोड्न कसैले प्रयत्न गरिरहेको हुनसक्छ । त्यो ढङ्गले आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर आन्दोलन गर्नुभयो चाहिँ अलि समस्या आउँछ।
नियमित प्राध्यापकले पनि प्रायजसाे समय विश्वविद्यालयमा बस्नुपर्यो । नेपाल सरकारले हामी सरहका लागि विभिन्न सुविधा दिन्छ भनेर भाग्ने काम नगर्नुस् त्यो तपाईँकै लागि हानिकारक हुनसक्छ । विभागमै बसेर विद्यार्थी र आफ्नो एउटा विषयमा केन्द्रित भएर काम गरिदिनुस् ।
प्राध्यापकको हकमा केही आंशिक प्राध्यापकहरुले उचित पारिश्रमिक भएन भनेर माग गरिरहनु भएको छ । यसमा भने त्रिवि प्रशासनले हेर्नुपर्छ । यसमा एउटा कक्षाको एक हजार दिने वा दुई हजार कति दिने हो त्यो प्रशासनले मिलाइ दिनु पर्छ । त्यति पैसा पाइसकेपछि उहाँहरुले मैले यो मितिदेखि यो मितिसम्म काम गर्ने तथा त्यसको मितिदेखि भोलिपल्टदेखि अन्यत्र जाने गरी सम्झौता गर्नुपर्छ ।
सम्झौता सकिएको भोलिपल्टदेखि मलाई स्थायी गर्नुपर्यो, करार सेवामा नियुक्ति गर्नुपर्यो भनेर आन्दोलन गर्नु भएन । किनकि त्रिविमा समय समयमा नयाँ शिक्षकको लागि विज्ञापन हुने गरेको छ । स्थायी हुने हो भने जाँच दिएर आउनु पर्यो, होइन भने आंशिक शिक्षक भएर रहन्छ । त्यसले के फरक पर्छ र ? आंशिक शिक्षक भएपछि त झन राम्रो छ । स्कुलमा काम गर्न पाइयो । अरु तीन वटा कलेजमा पनि काम गर्न पाइयो । स्थायी शिक्षकलाई त्यो सुविधा छैन ।
मेरो विभागका प्राध्यापकको हकमा विभागको काम बाहेक अन्यत्र काम नगर्ने गरी तोकिएको छ । उहाँहरुलाई अन्त काम गर्नु पर्यो भने यो के काम हो भनेर विभाग र केन्द्रको स्वीकृति लिएर निश्चित अवधिको लागि मात्र काम गर्न जान सक्नुहुन्छ । उहाँहरुलाई उचित तालिम र अन्य सुविधा विभागले दिएको हुनाले यसो गरिएको हो । शिक्षकले शिक्षक भएर रहिदिनु पर्यो । शिक्षकले विभाग छोडेर अन्त गइदिनु भएन ।
राम्रो ठाउँ देखेर एउटा आंशिक शिक्षक स्थायी हुनखोज्छ भने हामीले त्यसमा गर्व गर्नुपर्छ । किनकि उहाँहरुले यसलाई राम्रो ठाउँको रुपमा देख्नुभयो । तर, उहाँहरुलाई त्रिविले स्वागत गर्ने कानुनी प्रक्रिया छ । कानुनी प्रक्रियाबाट प्रवेश गर्नुस् त्यसका लागि सेवा आयोग छ ।
मेरो कुरा गर्दा २०५२ सालमा ट्रान्सक्रिप्ट लिन जाँदै गर्दा विभागीय प्रमुखले यहाँ आएर भोलिदेखि पढाउन आउ भनेर आंशिक शिक्षकको रुपमा नियुक्त भएँ । दरबन्दी खाली रहेछ अस्थायीमा विज्ञापन भयो त्यसमा छिरेँ । सेवा आयोग खुल्यो स्थायी भएँ । उप–प्राध्यापक भएँ । १२/१३ वर्षपछि सह–प्राध्यापक भएँ । पछि प्राध्यापक भएँ । नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत आफ्नो योग्यता क्षमता बढाउँदै पदोन्नति हुँदै जाने कुरा हो । आज नियुक्ति दिएर आजै सबै चिज हुँदैन।
नयाँ शिक्षकहरुका लागि पनि आंशिक शिक्षक हुनु त धेरै खुशी । कोही कोही नहुन सक्छन् । अब कोही प्रक्रियामा सामेल हुन सकेन भने त्यसमा केही गर्न सकिन्न बरु उहाँहरुको लागि प्रक्रिया केही लचिलो बनाउन सकिन्छ भन्ने हो । आंशिक शिक्षकलाई प्रतिवर्ष दुई/तीन नम्बर दिने गर्न सकिन्छ । किनकि यसले उहाँहरुको पनि श्रमको मूल्य हुन्छ ।
आंशिक शिक्षक कोही एमएस्सी गरेर आउनु भएको छ भने एमफिल गर्नुहोला अथवा पीएचडी गर्नुहोला । त्यो नम्बर पनि यता जोडिँदा उहाँहरुलाई अझ फाइदा हुन्छ । आंशिक शिक्षक बन्ने अनि अन्य अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्ने ।
त्रिवि प्रमाणपत्र बेच्ने विश्वविद्यालय त होइन नि । आजसम्म त्रिविले प्रमाणपत्र बेच्यो भन्ने त सुनिएको छैन नि । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय एकदमै चुस्त छ । परीक्षा प्रणाली एकदमै चुस्त छ। विराटनगरमा पढेको मान्छेको कापी डडेलधुरा गएर जाँचिने पनि हुनसक्छ । किनकि एकदमै फेरबदल भएर जाँचिन्छ । पढाउने र जाँच्ने शिक्षक त एउटै होइन नि ।
त्रिवि प्रशासनले सुधारको लागि गर्नुपर्ने काम
यो भन्दा अगाडि आंशिक शिक्षकहरुले लगाउनुभयो । उहाँहरुको माग पूरा भएन । उहाँहरुको माग पूरा भएजस्तो पनि भयो । हामी यति पैसा दिन्छौँ भन्ने पनि भयो । त्यो अनुसार फेरि पदाधिकारीले पनि अहिले हामी यति पैसा तत्काल दिन सक्दैनौँ भनेर अर्को निर्णय गर्नुभयो । त्यसकारण पदाधिकरीले पनि गर्न सक्छु भन्ने चिज सक्छु र गर्न नसक्ने चिज सक्दिन भनेर बरु म छोड्छु भन्ने मनस्थितिमा जानुपर्छ ।
विश्वविद्यालय प्रशासनले पहिलेदेखि गर्दै आएको कार्यक्रम हेर्ने हो भने अहिले अलि धेरै राम्रो काम गर्न लागेको हो कि भन्ने देखिन्छ । अब इतिहासमै नभएको ९/१० करोड रुपैयाँ यसपटक अनुसन्धान कोष भनेर अहिलेको पदाधिकारी आएपछि वितरण हुन लागेको छ । त्यो ९/१० करोड रुपैयाँ भनेको बिड गरेर प्रस्ताव पेस गरेर कसको प्रस्ताव उपयुक्त देखिन्छ उहाँहरुले प्राप्त गर्ने हो।
अनुसन्धान कोषको कुरा राम्रो छ । भौतिक पूर्वाधारको लागि उहाँहरु प्रयत्नरत हुनुहुन्छ । भूकम्पपछि भत्किएको केन्द्रीय कार्यालय बनाउनु भयो । अब यसलाई सुरक्षित गन्तव्य बनाउनु पर्छ । अर्थात रातको बाह्र/एक बजे आउँदा पनि खोलिने वातावरण बनाउनु पर्छ । पूर्व उप–कुलपति र वर्तमान उप–कुलपतिलाई पनि मैले यो अनुरोध गरेको छु ।
रातमा आउँदा कस्तो किसिमको सुरक्षा दिने तथा आफ्नो पैसाले गक्ष अनुसारको आफ्नो पैसाले चिया, कफी, खाना खान पाउने व्यवस्था गरिदियो त्रिविले भने यहाँका शिक्षकहरु एकदमै अब्बल शिक्षकहरु छानिनु भएको छ । त्रिविमा सम्बन्धित विषयका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ज्ञाता शिक्षक हुनुहुन्छ । उहाँहरुले यसलाई उत्थान गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।
अर्को भनेको त्रिवि धेरै ठूलो भयो । ६२ आङ्गिक क्याम्पस र एक हजार ४६ सम्बन्धन कलेजमा गरेर चार लाख २६ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत देशकै ठूलो विश्वविद्यालयलाई कीर्तिपुरमा बसेर नियन्त्रण गर्न नसकिने अवस्था भएको मैले देखेको छु । यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कि राजनीतिक तहमा एक प्रकारको सचेतना आउनुपर्यो । होइन आउँदैन र हामी पुरानै ढङ्गले जान्छौँ भनेदेखि विश्वविद्यालयलाई विभिन्न किसिमले ब्रेक डाउन गर्न सकिन्छ ।
सरकार र राजनीतिक दलको भूमिका महत्त्वपूर्ण
राजनीतिज्ञहरु क्षमतावान भन्दा पनि भागबण्डामै विश्वास गर्नुहुन्छ । नियुक्ति भइसकेकालाई पनि स्थानान्तरण तथा पदोन्नतिमा अझै पनि भागबण्डाकै नीति छ । आंशिक रुपमा यस पटकको पदाधिकारीको पालामा केही कम भएको छ ।
तालाबन्दी पनि राजनीतिक रुपले नै भएको हो भन्ने लाग्छ मलाई । कुन पार्टीले गर्यो के पार्टीले गर्यो भन्दा पनि सबै पार्टीले गरेका छन् । अहिले पनि यही सिलसिला कायम छ । यस पटक जसले गर्नुभएको छ, जुन कामले गर्नुभएको छ त्यो काम पनि यो हो भनेर स्पष्ट छ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यो काम पूरा गर्न पनि पदाधिकारीले सक्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन ।
उहाँहरु सबैजना एकै ठाउँमा बसेर त्रिविमा राजनीति नगर्ने भनेर निर्णय गरिदिनु भए सबैभन्दा राम्रो हुन्थ्यो । तर, उहाँहरुले त्यसो गर्न सक्नुहुन्न किनकि उहाँहरु नै यहाँ राजनीति गरेर त्यहाँ पुग्नु भएको छ । त्यो नभए पनि राजनीति गर्ने शैली परिवर्तन गरिदिनु भए हुन्थ्यो । बन्द नै गरेपछि त्यहाँ कसरी जाने । कत्ति काम अड्किन्छ । पहिले पहिले नेपाल बन्द धेरै हुन्थ्यो अहिले धेरै विरोध भएपछि कम हुन थालेको छ । धेरै भएर मान्छेले टेर्न छोडेका छन् । त्रिवि बन्द पनि प्रशासनले अलि आँट गर्ने हो र जसले बन्द गर्छ उहाँका मान्छेलाई टेलिफोन गरेर सीडीओ कार्यालयको सहयोग लिएर हुन्छ वा स्थानीय प्रशासनको सहयोग लिएर हुन्छ बिस्तारै ह्याक्सो ब्लेडको प्रयोग गर्नुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ मलाई ।
जायज माग छ भने वार्तामा नाजायज माग छ भने सरकारसँग वार्ता गरेर उहाँहरुको माग नजायज छ हामीले पूरा गर्न सक्दैनौँ भन्नुपर्छ । शिक्षा मन्त्री सह–कुलपति, प्रधानमन्त्री कुलपति भएका नाताले उहाँहरुले नै यसमा पहलकदमी लिएर खोल्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । सबै पार्टीका नेताहरु परिवर्तन हुनुपर्छ । त्रिवि बन्द गर्ने ठाउँ होइन । अब विश्वविद्यालय बन्द नगर्ने प्रतिबद्धता सबैले देखाउनु पर्छ ।
अस्ति एकजना शिक्षकलाई यहाँ हातपात गरियो । रेडियो, टीभीमा अन्तर्वार्ता भएपछि मलाई पनि गर्न सक्लान् । हामीले कसैप्रति पूर्वाग्रह राखेर त्यस्तो कुरा गरेका छैनौँ । मेरोमा सबै किसिमका विद्यार्थीहरु के गर्ने भनेर सरसल्लाहको लागि आउनुहुन्छ । उहाँहरु खुशी नै हुनुहुन्छ । शिक्षकसँग शिक्षा लिइसकेपछि उहाँहरुलाई गुरुको रुपमा मानिन्छ । धार्मिक हिसाबले पनि गुरुलाई दक्षिणा नदिइ हुँदैन भन्ने हाम्रो शास्त्रीय मान्यता पनि छ ।
ऋषिमुनीहरुले तपस्या गरेर बनाएको भूमिमा बसेका मान्छेले आफ्ना शिक्षक तथा आफ्ना सरहका विद्यार्थीलाई पढाएका शिक्षकलाई हातपात गर्छन् भने उहाँहरुप्रति हामी केही हदसम्म निर्मम पनि हुन सक्नुपर्छ । उहाँहरुले पनि आफ्नो सदाशयता प्रकट गरेर विद्यार्थीको हैसियतमा बसेर शिक्षकहरुसँग अनादरका शब्द प्रयोग नगरि आदरपूर्वक कुरा गरेर हातपात उहाँहरुले नै बन्द गर्नु पर्छ । हातपात नै भइसकेको छ भने त्यसमा संलग्न दोषीलाई कारबाही भने गर्नैपर्छ ।
( प्रा.डा अर्यालसँगको कुराकानीमा आधारित)
प्रा.डा. दीपक अर्याल
प्रा.डा. अर्याल त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जल तथा मौसम केन्द्रीय विभाग प्रमुखसमेत हुनुहुन्छ ।
Feb. 28, 2022, 7:49 p.m.
विश्वविधालय सुधारको लागी सरको बिचार बौद्दीक छ तर राजनैतिक बौद्दीकले त बुझ पचाईदिन्छन
Feb. 28, 2022, 10:04 a.m.
शिक्षक नै राजनीतिमा लाग्ने, विद्यार्थी पनि राजनीति गर्ने, कर्मचारीहरुको पनि पार्टी अनुसारको संगठन...अनि कहाँबाट राजनीतिमुक्त हुन्छ शिक्षण संस्था र कार्यालयहरु...???